Maalinta: Sebtember 10, 2018
Saxiixyada mashruuca wadada Sapanca
Markii la dhammeystiro geedi socodka qandaraaska ee Mashruuca Sapanca Teleferic, qandaraasyada la wadaago waxaa la kala saxiixday shirkadda la shaqeysa. Markii la dhammeystiro geedi socodka qandaraaska ee Mashruuca Sapanca Cable Car, qandaraas ayaa lala saxeexay shirkadda ay khusayso. Hoolka Magaalada Sapanca [More ...]
Goorma ayuu Tram ku tegi doonaa Samsun yimaado OMU?
Dadka deegaanka Samsun ayaa yaabay, 'Marka taraamka ka baxayo jaamacadda' ayaa helay jawaabta su'aasha. Qeybta Arimaha Sayniska ee Wasaarada Arimaha Bulshada ee Dowlada Sanka Serkan Çam ee mowduuca Samsunhaber.com'a waxaa laga helay hadalada. Ondokuz May ee taraamka Samsun [More ...]
Bishii Juun ee Akxaray
Waxaa adeegsaday Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli. oo ay maamusho Akçaray 1 ayaa loo diyaariyey dhammaan dadka Kocaeli illaa iyo bishii Agoosto 2017. [More ...]
Xarunta Dayactirka Baaskiilka Xarunta 26 ee Konya
Dowladda Hoose ee Magaalada Konya waxay sii wadaysaa inay baaskiilkooda ugu qeybiso carruurta 44 bin 400 ee ku jira mashruuca Imaatinka masjidka, iyadoo la siinayo macluumaadka ku saabsan taraafikada iyadoo la siinayo koofiyadaha badbaadada carruurta. Dayactirka baaskiillada [More ...]
Isticmaalayaasha Kandaanka wadada!
Wadada ku meel gaarka ah ee gaadiidka dadweynaha waxaa lagu go'aamiyay isgoysyada iskuxiran ee Wadada Izmit Kandira ee wadooyinka waaweyn. [More ...]
Garoomada State Maareeyaha Guud ee Maamulka iyo Guddoomiyaha Guddiga ee January Funda, xisaabaadka warbaahinta bulshada ee Twitter "EUROCONTROL 2018 AUGUST TURKEY MACLUUMAADKA" ayaa lagu helay oo ku saabsan wadaagga. Sida ku xusan xogta Tirakoobka Gobolka Tixraaca ee Eurocontrol Agoosto, [More ...]
Salaadda janaasada waxaa loo sameeyay Halil Kuzören (49) oo naftiisa ku waayey warshadaha birta ee Karabük Iron iyo steel (Kardemir). Shaqaalaha birta, ducada aaska ayaa u orday inay la kulmaan asxaabta. Shaqaalaha dayactirka korantada [More ...]
Qoraaga wargayska Hürriyet Ahmet Hakan wuxuu ku soo biiray magaca madaarka cusub ”waa mid ku bilaabmay tweet-ka qoraaga Habertürk Sevilay Yılman. Qoraaga Haberturk Sevilay Yilman, garoonka diyaaradaha sedexaad ee Istanbul, muxuu noqon doonaa magaca doodda ku saabsan su’aasha [More ...]
Tareenka ee Republic of Turkey (TCDD) la kulantay dhacdo ayaa dhalisay dood. Saxafiga Tülay Februarylı, oo ku jira qoraal uu ku wadaago akoonkiisa warbaahinta bulshada, wuxuu doonayey inuu helo tigidhkii ugu dambeeyay ee tareenka xawaaraha sare ku socda, laakiin [More ...]
Heshiiska mashruuca ee Sapanca ayaa maanta la saxiixi doonaa
Duqa Magaalada Sapanca Assoc. Dr. Aydın Yılmazer wuxuu sheegay in qandaraaska Mashruuca Sapanca Teleferic in la saxeexi doono 10 Sebtember Isniinta isla markaana ay tixgalinayaan dhammaan faahfaahinta si mashruucu uusan u keenin wax saameyn xun bulshada. 14 DHAMMAAN KA SAMEE MARKA SEPTEMBER [More ...]
Helitaanka Zamac ee Eskisehir
2 ee Eskişehir ayaa dib loo eegay iyadoo ay sabab u tahay kororka ballaaran ee ku yimid kharashyada, gaar ahaan kharashaadka korontada iyo shidaalka, kuwaasoo aan is badalin sannado. Go'aankan ka dib qiimeynta qiimaha ee UKOME Smart ESCART 2 [More ...]
Dowladda Hoose ee Antalya, iyo ASAT waxay sameysteen maalgalin dhan 2014 milyan TL Alanya tan iyo 505. Iyada oo laga fulinayo mashaariic isgoysyada oo lala kaashanayo wadooyinka waaweyn, tiradan ayaa gaadhay 704 milyan ginni. Metropolitan [More ...]
RayHaber 10.09.2018 Warbixinta Shirka
Debushe Nadiifinta iyo Warbaahinta Isgaadhsiinta ee Bridges iyo Culverts u dhexeeya Ulukışla iyo Yenice
Iskuulka Dambiyada Iskuulka Laga Dareemay ee Sakarya
Waaxda Gaadiidka Magaalooyinka waxay hirgalineysaa codsi cusub. Fatih Pistil, oo cadeeyay inay ardayda u suurtogelin doonaan inay marinnada ka dhigaan dariiqo caafimaad qaba iyagoo u rogaya isgoysyada dugsiga casaan [More ...]